ကူးဆကျမှုကို ထိနျးခြုပျနပွေီး မိဘမြားအနဖွေငျ့ စိုးရိမျကွီးစရာ မလိုကွောငျး … – Shwe Thadin
ကူးဆကျမှုကို ထိနျးခြုပျနပွေီး မိဘမြားအနဖွေငျ့ စိုးရိမျကွီးစရာ မလိုကွောငျး …
ကိုဗဈ(၁၉) ရောဂါဖွဈပှားမှုမြားနသေညျ့ နိုငျငံမြားမှာပငျ ကြောငျးဖှငျ့ရငျး ကိုဗဈထိနျးခြုပျခွငျးမြားကို တဈပွိုငျတညျးလုပျဆောငျနေ၍ ကိုဗဈ (၁၉) ကာ ကှယျရေး စညျးကမျးမြားကိုလိုကျနာပွီး မိဘမြားအနဖွေငျ့စိုးရိမျကွီးစရာမလိုကွောငျး..
ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစကျ ရောဂါတိုကျဖကျြရေးဌာန ညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာခငျခငျကွီးကပွောဆိုသညျ။“လကျရှိအခွအေနမှော ကလေးတှကေို မိဘတှကေ ကြောငျးတှမှော ကိုဗဈတှတေ့ာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ စိုးရိမျကွတယျ။.
ကိုယျတိုငျကလညျး မိဘဖွဈတော့ သိပါတယျ။ကြောငျးတှမှော ဖွဈတယျဆိုတာကလညျး ရောဂါပိုးတှတေဲ့တဈယောကျ၊ နှဈယောကျကနပွေီး ကူးစကျသှားတဲ့ သ ဘောရှိတဲ့အတှကျ နှာခေါငျးစညျးတပျမယျ။လကျသနျ့ဆေးရညျနဲ့ မကွာခဏ ဆေးမယျဆိုရငျ…
ကိုယျ့ထမငျးဘူးနဲ့ကိုယျစား၊ ကိုယျ့ အသုံးအဆောငျနဲ့ကိုယျ မရောနှောဘူး။ အခငျြးခငျြးမရောနှောဘူး။ မိမိကလေးနမေကောငျးဘူး။ဖြားနာမယျဆိုရငျ၊ ကိုယျ့အိမျမှာ လူကွီးတဈဦးက ကိုဗဈလက်ခဏာတှရှေိတယျဆိုရငျ ကလေးကို ကြောငျးမလှတျနဲ့ပေါ့။…
နောကျတဈခကျြက ကလေးကို ကိုဗဈစညျးကမျးတှကေို သသေခြောခြာ လကေ့ငျြ့သငျထားပေးထားမယျဆိုရငျ ကွောကျစရာမလိုပါဘူး။ကလေးတှမှောဖွဈရငျသေ ဆုံးမှုက ရာခိုငျနညျးတယျ။ကလေးတှမှော ဖွဈတာကလညျး ကိုဗဈစုစုပေါငျး ဖွဈတာထကျ ၁ ရာခိုငျနှုနျး၊..
၂ ရာခိုငျနှုနျးပဲရှိပါတယျ။ကိုဗဈ(၁၉)က ဘယျတော့မှဆုံးမယျဆိုတာ မပွောနိုငျသေးဘူး။ ရောဂါ ဖွဈပှားမှုမြားဆဲ ထိုငျးမှာတောငျ ဇှနျ ၁၄ ရကျက ကြောငျးတှဖှေငျ့နတေယျ။ နောကျလက စပွီးတော့ ထိုငျးနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ကမျးခွကေို ဖှငျ့တော့မှာပေါ့” ဟု ၎င်းငျးက ပွောဆိုသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးရှိ မဟျောသဓာကိုယျပိုငျအထကျကြောငျးနှငျ့ TTC ကြောငျးမြားတှငျ ကိုဗဈ(၁၉) ရောဂါ ကူးစကျမှုမြားကို ထိနျးခြုပျနိုငျကွောငျး ဒေါကျတာ ခငျခငျကွီးက ဆကျလကျပွောဆိုသညျ။(၁၉)ရောဂါကူးစကျမှုမြား ရှိလာပွီး လကျရှိတှငျ ကိုဗဈ(၁၉)ရောဂါ…
အဖွဈမြားနသေော တောငျငူမွို့နယျ ဖွူးမွို့နယျ၊ လကျပံတနျးမွို့နယျ၊ ပလကျဝမွို့နယျ၊ သာယာဝတီမွို့နယျ၊ လားရှိုးမွို့နယျတို့တှငျ စာသငျ ကြောငျးမြား ပိတျထားကွောငျး သိရသညျ။…
ကူးဆက်မှုကို ထိန်းချုပ်နေပြီး မိဘများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ကြီးစရာ မလိုကြောင်း …
ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနေသည့် နိုင်ငံများမှာပင် ကျောင်းဖွင့်ရင်း ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ခြင်းများကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်နေ၍ ကိုဗစ် (၁၉) ကာ ကွယ်ရေး စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီး မိဘများအနေဖြင့်စိုးရိမ်ကြီးစရာမလိုကြောင်း..
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုကူးစက် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောဆိုသည်။“လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကလေးတွေကို မိဘတွေက ကျောင်းတွေမှာ ကိုဗစ်တွေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စိုးရိမ်ကြတယ်။.
ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိဘဖြစ်တော့ သိပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်း ရောဂါပိုးတွေ့တဲ့တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်ကနေပြီး ကူးစက်သွားတဲ့ သ ဘောရှိတဲ့အတွက် နှာခေါင်းစည်းတပ်မယ်။လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ မကြာခဏ ဆေးမယ်ဆိုရင်…
ကိုယ့်ထမင်းဘူးနဲ့ကိုယ်စား၊ ကိုယ့် အသုံးအဆောင်နဲ့ကိုယ် မရောနှောဘူး။ အချင်းချင်းမရောနှောဘူး။ မိမိကလေးနေမကောင်းဘူး။ဖျားနာမယ်ဆိုရင်၊ ကိုယ့်အိမ်မှာ လူကြီးတစ်ဦးက ကိုဗစ်လက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုရင် ကလေးကို ကျောင်းမလွှတ်နဲ့ပေါ့။…
နောက်တစ်ချက်က ကလေးကို ကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေကို သေသေချာချာ လေ့ကျင့်သင်ထားပေးထားမယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင်သေ ဆုံးမှုက ရာခိုင်နည်းတယ်။ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တာကလည်း ကိုဗစ်စုစုပေါင်း ဖြစ်တာထက် ၁ ရာခိုင်နှုန်း၊..
၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။ကိုဗစ်(၁၉)က ဘယ်တော့မှဆုံးမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများဆဲ ထိုင်းမှာတောင် ဇွန် ၁၄ ရက်က ကျောင်းတွေဖွင့်နေတယ်။ နောက်လက စပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကမ်းခြေကို ဖွင့်တော့မှာပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မဟော်သဓာကိုယ်ပိုင်အထက်ကျောင်းနှင့် TTC ကျောင်းများတွင် ကိုဗစ်(၁၉) ရောဂါ ကူးစက်မှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာ ခင်ခင်ကြီးက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။(၁၉)ရောဂါကူးစက်မှုများ ရှိလာပြီး လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်(၁၉)ရောဂါ…
အဖြစ်များနေသော တောင်ငူမြို့နယ် ဖြူးမြို့နယ်၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ သာယာဝတီမြို့နယ်၊ လားရှိုးမြို့နယ်တို့တွင် စာသင် ကျောင်းများ ပိတ်ထားကြောင်း သိရသည်။…
မန်တလေးက CDMရဲအရာရှိတဈဦးအား မိသားစုကို အသိမပေးဘဲ ထောငျဒဏျခမြှတျ
ကောလဟာလသတငျးတှေ ပြံ့နှံ့နတောကွောငျ့ ရမှေနျရဲ့ နာရေးကိုတောငျ နှုတျဆကျခှငျ့ မရခဲ့တဲ့အတှကျ ဝမျးနညျးနတေဲ့ မီးနို